Nginyathela gel ukuvenisha: incazelo, ukusebenza kanye nobuchwepheshe Izibuyekezo
Amaphethini ku izinzipho, okuyizinto ubukhulu ezifanayo nesimo esifanele, kubonakala sengathi kunento ingafinyeleleki. Kodwa manje lezo zibalo kungenziwa hhayi kuphela ngesikhathi amakhosi salon, kodwa futhi ekhaya. Futhi zonke sibonga yokuthi wokushaya yasungulwa gel nail sula.
Uma ukhuluma ulimi ochwepheshe, ngokuvamile amaphethini shtampirovanie. Lesi sibalo, nakuba libukeka omuhle wobuciko, kodwa ukukwenza - nemnandi. Ngaphezu kwalokho, inqubo abulawe yayo kunalokho lasekuqaleni. Ukuze sibhekane nalo ngisho ingane.
Abanye bambuza ukuthi ukwenza nginyathela gel ukuvenisha? Yiqiniso! Ukuze uqale ukunquma choice of ukuvenisha. Ungakhohlwa ukuthi imibala enamathela ngoba wokushaya kufanele zikhethwa isitayela sokugqoka nombala walo. Ukusebenzisa nginyathela nail gel sula , futhi amehlo akho engqondo, ongayifinyelela imiphumela engakaze ibonwe. A salon manicure ngeke nakakhulu!
Uhlu amathuluzi adingekayo kanye nezinsiza
Izinto namathuluzi wokushaya angathengwa ngasiphi esitolo ukuthi uthengisa izimonyo. kudingeka salokhu inqubo:
Metal ipuleti eziqoshwe mini-yezicathulo zakhe amaphethini. Ngokuvamile, umuntu disc iqukethe ngokwako mikhondo eziningana ezahlukene noma amaphethini. Ungakhetha noma yiliphi, konke kuncike izintandokazi zakho siqu.
Varnishes, lapho base sisetshenziswa futhi isithombe (izitsha eziyisikhombisa eziningi).
Nokuqiniseka kusho umbala okusobala.
Liquid elokususa ukuvenisha (sakhiwa kufanele kungabi uwoyela).
Ngamunye ithuluzi ohlwini angathengwa ngayodwana noma iqoqo.
Amathiphu ambalwa ukukusiza uyenzele nginyathela gel ukuvenisha:
Ngaphambi kokuqala zonke izinqubo kufanele ageze izandla zakho emanzini afudumele. Qiniseka ukuthi ome esandleni ngasinye usebenzisa ithawula iphepha futhi Sula ithawula ehlanzekile. nail ebusweni kufanele degreased nge acetone.
Isinyathelo esilandelayo kuyoba isicelo base ungqimba. Uma lesi sinyathelo senziwe, kudingeka uqiniseke ukuthi wawusomile. Kungenjalo, amaphethini kungenzeka usongene. Ngaphezu kwalokho, ungqimba base nedosohshy kalula ehlala, okungaholela ukubukeka imibimbi phezu nail.
Sekuyisikhathi sokuba i-wokushaya disc. Uma isanda kuthenga futhi ingakamiswa esetshenziswa, kubalulekile ukususa ifilimu zokuzivikela.
Okudingayo ukuze wokushaya ezinhle
Isinyathelo esilandelayo kuyoba isicelo se-lacquer ku-disc. Kuyadingeka ukumboza wonke kobuso stencil wokushaya.
Uvele ngokweqile kumele zisuswe usebenzisa bushelelezi ekhethekile, othiwa skraper master nail. Lokhu kwenziwa ngokunyakaza ngokushesha. Ngokwengxenye kusiza ukuthi bushelelezi kumele igcinwe ukuze engela kwaba 45 degrees. Kufanele kuqashelwe ukuze skraper hhayi kakhulu ocindezelwe kobuso disc. Ukuvenisha akahlale imigodi.
Khona-ke kudingeka ucindezele isitembu kuya disc, kancane laminating phezulu. Lokhu kumele kwenziwe ngokushesha, kungenjalo upende ngeke isikhathi ukuze ome futhi iphethini kabi ezinyathelisiwe.
Isinyathelo esilandelayo ukuze ucindezele isitembu nge yokuvula plate nail. Kumele yagingqika ebusweni ngosiko onqenqemeni. Uma isithombe zaphumela hhayi ngokugcwele, khona-ke ukuvenisha bomile noma uzipho amafutha enganele.
Landela lezi imithetho, futhi manicure yakho Kuyophumela ethubeni enhle futhi ubeke izinto ngononina.
Indlela yokusebenzisa nginyathela nail (gel sula kudinga ukuhambisana zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama), yazise ngala macebiso alandelayo:
Wanyathelisa esikhumbeni ebusweni lacquer kususwe kalula nge swab ukotini noma ibhulashi.
Izithombe isuswe ngu uketshezi lapho ayiqukethe e oyiyo acetone. Uma kungenjalo ungqimba kungalimala kalula nge gel ukuvenisha.
Uma die akwanele kwathi umfanekiso ocacile, noma cha kwagxila ngokugcwele, kubalulekile ukususa futhi enze zonke izinyathelo futhi. Kungcono sifinyelele umphumela ephelele. Uma ungeke ukwazi lengqondo uthumele futhi gel nail sula seyomile ngokushesha, kuba lula ukulungisa. Vele Sula ungcwecwe ngengxube acetone. Lokhu kuzovumela ukuvenisha ukuze ome kancane ngenxa yokuthi amaconsi amancane liquid ahlale phezu kwe-disc.
Ungase futhi zama ibenze emuva cuticle emhlabeni ipuleti nail. Ngakho isitembu iphethini kungaba thatha iningi ebusweni.
Lapho ekhetha uketshezi gel remover nail sula Kufanele kukhethwe umuntu lapho kungekho khona amafutha. Kungenjalo, iphethini ngeke kufiphazwe, rasplyvetsya noma akuphrinthiwe.
Imfihlo eyinhloko ngokusebenzisa nginyathela
A amacebo ambalwa ezokwenza ukuba zifunde ukwenza nginyathela phezu gel lacquer kwafana amakhosi salon.
Ngaphambi kokuqala manicure kufanele abaqeqeshiwe ukusebenzisa yokuvula substrate. Yiqiniso, umzamo wokuqala kungenzeka akuphumelelanga futhi nginyathela gel ukuvenisha ngeke ngempela ephelele. Kodwa maduze zonke izikhathi wachitha.
Ungakhethi upende nge isicwebezelisi noma pearl njengoba base elingenamikhono. Izithombe ezithathwe nge-ke, musa ukubheka ephikisanayo ngakho futhi ngokucacile njengoba singathanda.
Ngemva upende isetshenzisiwe skrapere, waphuthuma bahlanza usebenzisa iphepha ithawula. Linda omiswe yayo akudingekile.
Awudingi ukuba isetshenziswe ukwakha gel-nail izithombe. Izindlela ezinjalo ayikwazi sihleli phezu.
I enamathela phezu ipuleti bome nje umzuzwana. Futhi phezu nail, Uqinisa kancane kakhulu. Ngakho-ke, kufanele ngokushesha ngangokunokwenzeka ngezibhakela iphethini. Kumele kukhunjulwe ukuthi ayanda izinga lokushisa ekamelweni, ukusebenza Ekupholiseni noma iwindi elivulekile nomthelela eminye iphele ukuvenisha. Ngakho-ke kufanele zisuswe phambi nginyathela konke kungathinta ukuqina enamathela.
Ukuze ufunde indlela yokukwenza nginyathela phezu gel nail, uqaphele tricks ezilandelayo:
Upende kufanele zisetshenziswe imiklamo ngokushesha futhi ngokuqiniseka yonkana kudiski. Asikho isidingo ukusebenzisa ukuvenisha gel emaphethelweni isithombe, bese usebenzisa i-skrapera ukusabalalisa edingekayo ipuleti. Kulokhu, akubona bonke kude agcwaliswa ngokulinganayo.
Ngaphambi nginyathela kufanele ucabange mayelana engela esithombeni izohlala izipikili. Udinga ukunquma ukuthi, ukuze ukusonta, egqwalile isitembu kanye nephethini isikhathi eside, kungenjalo ungase uqale zome.
Akubalulekile ukusebenzisa isandla ukhilimu ngaphambi kokufaka i-sula gel. Njengoba kushiwo ngaphambili, akwanele skimmed ebusweni ayiqondakali wokushaya.
Isikhumba, ngemva kokuchitha zonke izinqubo ezidingekayo, kutuswa ukuba Sula swab ukotini, okuyinto wayeke waxoxa ngaphambili bacwilisa ku ketshezi nail remover sula. Ungasebenzisa umqondisi ekhethekile.
Ezinye nail-master asetshenziselwe le nhloso imivimbo ezincane yemigoqo ethile eminyangweni kahulumeni. Bafaka ke ecaleni okunamathelayo esikhunjeni. Scotch uyokhanga ngokwayo zonke izingcezu ezincane gel ukuvenisha. Ngendlela efanayo zingase zihlanzwe izitembu.
Nginyathela gel lacquer kungenziwa ngezindlela ezimbili. Okokuqala, ungqimba ukuvenisha laligcwele izindlela fixing, bese ehlotshisiwe iphethini. Icala lesibili is wanyathela isithombe. Ngemva kwalokho-ke lisetshenziswa ukuvenisha gel fixer.
Plus nginyathela wukuthi ungakwazi ukushintsha amaphethini ku izinzipho njengoba kaningi ngendlela othanda ngayo. Vele Sula iphethini, futhi isicelo esisha ukuthi uyayijabulela. Isitembu kanye disc zigezwe kapende izinhlayiya esisele kuwo. Kulokhu, ungqimba base usekhona. A nail design entsha akudingi isikhathi esiningi, okuyinto ngokungangabazeki elula kakhulu.
Umonakalo umdwebo enamathiselwe umbala gel okusobala. Linda iphele amaphethini babe eside. Image ukuhlanganisa kwenzekani fast ngokwanele. Sebenzisa gel ukuba iphethini nomunye unhlangothi, motion bushelelezi.
Asikho isidingo cindezela kanzima ebusweni ibhulashi nail. Kwakukhishwa iconsi elilodwa okufanele zabelwe umdvwebo. Ngaphambi kokuqhubeka nesicelo of nginyathela kufanele ucabange kusengaphambili kanjani uyobheka figure ekupheleni futhi sihlanganise imibala.
Nge le ndlela eqondile ungenza manicure Chic izandla zabo. Shiya izikhathi ezimbalwa ukuzijayeza kanye ematfuba wokushaya ku yenqubo emangalisayo, umphumela okuyinto uzongithanda. Izimpendulo ezivela kulabo kakade wazama inqubo, ikakhulukazi omuhle. Kukhona abesifazane abenza hhayi ngokushesha bakwazi kahle. Kodwa kancane ukuqeqeshwa, futhi bathole indlela enhle yokwenza izinzipho zakho ezikhangayo ngaphandle kosizo ochwepheshe.
Lac CND Vinylux: ukubuyekeza nezincomo
Izinombolo ku izipikili Wabasaqalayo: imibono original nobuchwepheshe
French UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki: imibono ezithakazelisayo nezithombe ukuzimonyonga
Manicure Pusher: kanjani ukukhetha kanye nokusetshenziswa
Kazan Zoological futhi Botanic Garden: incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Versification: ahambisana igama elithi "izimangaliso"
Motor imoto: Ngokuzayo iseduze kakade
Kunganjani uthenga Liebherr esiqandisini: ukubuyekezwa. Seziqa Liebherr - izici onobuhle ehlukahlukene
Insumansumane ngemvelaphi abantu. Izinganekwane Kwezwe
Indlela ukupheka yenkomo imiqulu ezazigxishwe?